U bevindt zich hier: Home Super User
Madaxda Qaranka oo cambaareysay weerarradii Paris	seroquel xr for saleSi la mid ah dunida kale oo dhan, dowladda Soomaaliya waxay si adag u cambaareysay weerarradii argagixiso ee Jimcihii ina dhaafay ka dhacay magaalada Paris ee caasimadda Faransiiska, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo rayid ah.
buy depakote onlineMadaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in uu aad uga naxay ugana murugooday weerarkii macno darrada ahaa ee argagixisadu ka geysteen Paris, waxa uuna sheegay in ay garab taagan yihiin shacabka reer Fransa.
melatonin dogs saleMadaxweynaha ayaa tacsi u diray dhiggiisa Faransiiska iyo ehelada dadkii ku naf waayay weerarradii bahalnimo ee Paris.
Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa isaguna yiri “ Waxaan si xoog leh u cambaareynayaa weerarkii bani’aadminimada ka dhanka ahaa ee Paris,waxaanna tacsi u dirayaa dadkii waayay kuwii ay jeclaayeen”cheap viagra sale.
In ka badan 127 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxyo, toogashooyin in falal afduub oo ka dhacay garoon kubbadeed, masrax iyo makhaayado ku yaalla magaalada Paris ee dalka Faransiiskabuy eos lip balm ontario.
buy benadryl-d online200 oo qof dad ka badan ayaa ku dhaawacmay weerarradan oo ay fuliyeen niman hubeysan oo qaarkood ay is qarxiyeen, halka kuwo kalena ay rasaas oodda uga qaadeen dad ku jiray masrax ka dib markii ay go’doomiyeen.
Madaxweynaha Faransiiska, Fransua Holland ayaa sheegay in weerarka Paris uu yahay dagaal ka dhan ah France,waxa uu dhawaaqay xaalad deg deg ah iyo 3 maalmood oo baroor diiq ah, waxa uuna amray in la xiro xuduudda Faransiiskause of cystone tablets.
order cialis online overnightWaa weerarkii ugu dhiigga badnaa ee Faransiiska ka dhaca qarnigan.
Kooxda argagixisada ah ee Daacish ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkanbuy augmentin generic.
Hoggaamiyeyaasha dalalka caalamka ayaa si kulul u cambaareeyay weerarrada argagixiso ee Paris, waxa ayna ballan qaadeen in ay iska kaashan doonaan la dagaallanka argagixisadacoumadin discount coupons.	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	Taliyaha ciidanka oo uga mahadceliyey Safiirka Britain taageerada ciidanka xoogga	benzac ac wash buy onlineTaliyaha Ciidamadda Xoogga Dalka Soomaaliyeed Sareyo Gaas Maxamed Aaden Axmed, ayaa kulan kula yeeshan xarunta Safaaradda Great Britain ee magaalada Muqdisho Safiirka u fadhiya Soomaaliya Danjire Harriett Mathews. Waxaana ay ka wada hadleen taageerada ay Boqortooyada Ingiriisku siiso ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed. Iyadoo ay isku afgarteen in la kordhiyo tirada iyo taakuleynta ay siiyaan ciidanka xoogga.
lamictal buy cheapDanjire Harriett Mathews ayaa balanqaaday inay bixinayaan mushaaraadka ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta 60aad, iyadoo sidoo kale sheegtay in ay ka qeyb qaadanayaan dib u dhiska xeryaha Ciidamada si loo xoojiyo tayada iyo tababarka ciidanka.
Sidoo kale Danjiruhu waxay ka tacsiyeysay dadkii ku dhintay weerarkii Argagixiso ee Hotel Saxafi, iyadoo u rajeysay inta dhaawaca ahna in ay kasoo kabtaan.
Ugu danbeyntii Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Gaas Maxamed Aaden Axmed ayaa uga mahadceliyey Safiirka iyo Dawladda Britain taageerada ay siinayso dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadaallada dib-u-dhiska dalka.
Taliyaha oo ka hadlayay wuxuu yiri: “Waxaan Safiirka isku afgaranay sidii ay Britain u xoojin lahayd taageerada ay siiso ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan soo dhaweynayaa balanqaadka ay sameysay inagoo rajeynaya in uu hirgeli doono xiliyada dhow ee soo socda”.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tan iyo intii la magacaabay wadey sidii dib u dhis xooggan loogu sameyn lahaa ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo sidii loo heli lahaa xuquuqda ciidamada Qalabka sida.	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	Akhriso:- Taariikh Nololeedka Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada	Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale), Gudoomiyaha Gobolka Benaadir ahna Duqa cusub ee Magaalada Muqdisho, wuxuu dhashay 1965, wuxuuna ku dhashay magaalada Muqdisho.
Waxabarashadiisii Hoose iyo Dhexe wuxuu ku soo qaatay Madrasadii Allahida 1980-1985, Dugsiga Sare wuxuu ku qaatay wadanka Masar, asagoo ka baxay Machadka Albictha Alazhar al sharif , Cairo, Masar. Isla wadanka Masar ayuu ka bilaabay heerka aqooneed ee Jaamacadda, wuxuuna ka qalinjabiyay Jamacadda American Open Univertity, Cairo, Masar sanad daraasadeedkii 2004-2008, asagoo ka bartay Daraasaadka Islaamiyah Wal Carabiyah, Sidookale wuxuu ka qaatay isla Al-azhar Al-shariif halsano oo Cilmiga Bulshada ah.
1986-1991, wuxuu ka shaqaynayay Wakaaladda Dhismaha Soomaaliyeed ee Wasaaradda Howlaha Guud iyo Guryaynta, asagoo ka soo qabtay jagooyinka Madaxa Xafiisyada Logistics-ka iyo Wax soo saarka. 1992-1993, wuxuu soo noqday Agaasimaha Waaxda Batroolka ee Wasaaradda Batroolka iyo Tamarta. 1993-1994, wuxuu noqday Agaasimaha Xafiiska Dagmada Wadajir ee Hy’atu-Al Culyaa. 1994-1996, Wuxuu ahaa Agaasimaha Xafiiska Gargaarka ee Hay’adda Muslim World League Laanta Dagmada Wadajir ee Magaalada Muqdisho. 1995-
1997, wuxuu ahaa Xoghayaha Hay’adda Slamic Relief Association, Xafiiska Mudisho. 1996-
1998, wuxuu Aas aasay Maamulena ka noqday Xarunta Agoonta ee Albirri, Muqdisho. 2004-
2010, wuxuu wakiil u noqday Shirkada Daawada Al-mustaqbal, laanteeda Cairo, Masar. 2005-
2008, wuxuu noqday Wakiilka Shirkadda Dahabshiil qeybta Ajaanibta ee Cairo, Wadanka Masar. 2008-2013, wuxuu qabtay xilka Gudoomiyahay Xarunta Nabadda iyo Horumarinta Bulshada ee Cairo, Wadanka Masar. 2010-2011 wuxuu noqday Gudoomiyaha Jaaliyada Soomaaliyeed ee wadanka Masar. 2009-2011, wuxuu xubin ka ahaa Ururka Saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Masar.
Yuusuf Xuseen Jimcaale (Madaale), intii uu ardayga ka ahaa Dalka Masar, wuxuu caan ku ahaa ka shaqaynta iyo u adeegidda Jaaliyadda Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda, xoojinta xiriirka Jaaliyadda iyo kan dadka reer Masar, sidookale xoojinta xiriirka Safaaradda Soomaaliyeed iyo Jaaliyadda. Wuxuu aad uga digi jiray dhaqamada aan wanagsanayn oo ay qabyaaladdu ka mid tahay. 2011-2015, Wuxuu qabtay xilka Xoghayaha Arrimaha Gudaha ee Xisbga Nabadda Horumarka (PDP).	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	BAYAAN: Tilmaamaha Hab-raaca hannaanka doorashada 2016-ka	Madasha Wada-tashiga Qaran ee dalka, ayaa soo saaray bayaan ku aaddan tilmaamaha hab-raaca doorashada loo marayo sanadka 2016-ka, wuxuuna u qoran yahay bayaankaasi sidan;
Iyada oo la eegayo xaaladda ka jirta Soomaaliya, ayaa Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Baarlamaanka Federaalkaba si wadajir ah ugu dhawaaqeen, 28kii bishii Luulyo 2015 in doorasho qof iyo codkiisa ah aysan ka dhici karin, sida ku cad Dastuurka Federaalka Ku-Meelgaarka ah.
Madaxweynaha, Xukuumadda, Barlamaanka iyo madaxda Dawlad Goboleedyada, Maaamul Gobollada ku-meel-gaarka ah iyo bulshada rayidka ayaa isku raacay Mabaadi’ Tilmaameed ee lagu ansaxiyay shirkii Madasha Iskaashiga ee Heerka Sare ee ka dhacay magaalada Muqdisho 28-30 bishii Luulyo 2015. Mabaadi’da Tilmaadeedkaas oo ujeedaddeedu tahay in geeddi socodka doorashada sannadka 2016 uu soo bandhigo hab sharcinimadiisu sarreyso iyada oo loo marayo hab salballaaran, oo ku saleysan geedi-socod loo dhanyahay, kaas oo wada metelaya bulshada Soomaaliyeed.
Habka wadatashiga ah wuxuu u ogolaanayaa dadka Soomaaliyeed fursad ay si wadajir ah ugu fekeraan uguna gaaraan go’aan ay u wada dhan yihiin oo khuseeya sidii loo qaban lahaa doorashada 2016ka. Geeddi-socodkan waxaa loo qaabeeyay in uu ahaado mid loo dhan yahay oo isu keenaya aragtiyo kala geddisan oo ka imanaya dhammaan qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed. Iyadoo la eegayo Hiigsiga Cusub iyo Aragtiga 2016 oo dhiiri gelinaya ka wada qaybgalka, waxaa muhiim ah in ay geeddi-socodka ka qaybgalaan haweenka, dhallinyarada iyo dadka laga tirada badan yahay. Talooyinka ka soo baxa waxay ka tarjumayaan danta iyo dareenka dadka Soomaaliyeed. Taas oo ku saleysan sidii lagu heli lahaa ka qaybgal siyaasadeed ee loo wada dhan yahay, ka dibna lagu dhiso bulsho nabad ah.
Mabaadi’da Wax Hagta
Geedi-socodka Doorashada Sannadka 2016ka…
Waa in uu muujiyo“sharciyad sarreysa” oo loo maray hannaan ballaaran oo loo wada dhanyahay oo ay isla ogolaadeen Dawlad Gobaleedyada Xubnaha ah ee hadda jiro iyo kuwa samaysmaya, waana in uu xaqiijiyo natiijo ay iska dhex aragto bulshada Soomaaliyeed ee maanta (dadka iyo deegaanka intaba) ayada oo xubnaha bulshaduna ay ku heshiiyeen hab-raac cad oo ay isla meel dhigeen. Waa in uu la jaan-qaado dar-dar gelinta Dastuurka Federaalka Kumeelgaarka. Waa in uu kor u qaado oo uu xaqiijiyo ka-qayb qaadashada haweenka iyo dadka laga tirada badanyahay. Waa in uu dhiiri-geliyaa ka-qayb qaadashada axsaabta siyaasadeed hadba heerka uu u ogolaanayo nidaamka Axsaabta Siyaasadeed. Waa in uu kor u qaadaa midnimo qaran, ilaa iyo intii suurto gal ahna, uu hannaan midaysan (ka hir-geliyaa) dhamaan gobolada. Waa in uu noqdaa mid xaqiiqada ku qotoma marka loo eego dhaqaalaha la heli karo, tayada farsamo, iyo amniga. Waa in uu noqdaa mid daah furan, isla xisaabtan leh oo kor u qaada kalsoonida dadweynaha. Waa in uu xambaarsanyahay hannaan ku haboon oo loo mari karo cabashooyinka iyo dacwadaha. Waa in uu si buuxdo u tixgeliyaa sida loo doonayo in Baarlamaanka Federaalka Soomaaliyeed uu u noqdo mid ka turjumaya oo u taagan midnimada dhulka Soomaaliya. Waa in aysan wax yeello ka imaanin, sida dhiri-gelinta dhaq-dhaqaayo ay ka dhalan karaan hurinta colaado ama wiiqid la wiiqayo horumarada ilaa iyo hadda laga gaaray geedi-socodka dimoqoraadiyaynta iyo dhismaha dowladda.
Habdhismeedka Madasha Wadatashiga
In la qabto doorasho sannadka 2016 waxay si cad ugu qeexantahay Dastuurka Federaalka Ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. Aragtida Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ku saleysan Hiigsiga 2016 ayaa si cad u qeexaysa baahida loo qabo in la helo hab lagu kalsoonaan/aamini karo oo awoodda xukunka lagu wareejiyo sannadka 2016, waana arrin mudnaan sare leh. Muddadii afarta sanno ahayd ee uu Dastuurku siiyay Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku eg tahay bisha Agoosto 2016. Iyada oo laga ambaqaadayo wadatashigii loo wada dhammaa ee lala yeeshay Baarlamaanka Federaalka, Dowlad Goboleedyada, Bulshada Rayidka ah ayay Dowladdu ku dhawaaqday in doorasho ku saleysan qof iyo codkiisa ayna suurtagal ahayn sannadka 2016.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ka go’an in ay u hawlgasho sidii lagu gaari lahaa hannaan dimuqraadi ah ee loo wada dhan yahay iyo sidii si daahfuran awoodda laysugu wareejin lahaa sannadka 2016. Sidaas darteed, Dowladda Federaalka Soomaaliyeed oo ay weheliyaan hay’adaha kale ee Dastuurku waajibaadka siiyay ayaa soo bandhigay Mabaadi’ Hagaysa habraaca doorashada 2016 kuwaas oo lagu ansaxiyay Madashii Iskaashiga ee Heerka Sare ee ka dhacday Muqdisho 29-30 Luulyo 2015. Qorshe Hawleedkan oo ku saleysan Mabaadi’ Tilmaameed ku saabsan sidii lagu qaban lahaa hannaan wadatashi qaran oo si is afgarad go’aan loogu gaarayo habka ugu habboon ee doorasho loo qaban lahaa sannadka 2016. Siyaasadda Dowladdu waxay sidoo kale ku qotontaa heshiiskii dhexmaray Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Baarlamaanka Federaalka 28kii bishii Luulyo 2015 iyo wadatashiyadii ay la yeelatay Dawlad Goboleedyada oo markii dambena lala wadaagay beesha caalamka.
Si loo gaaro hab is afgarad qaran ee shaqeyn kara, geeddi-socodka wadatashiga qaran waxaa loogu talagay in uu ahaado mid leh marxalado badan, lehna ka qaybgal loo wada dhan yahay oo ka kooban shirar wadatashi oo ay ka qayb qaadanayaan dhammaan qaybaha bulshada Soomaaliyeed oo marka u dambeysana lagu gaarayo heshiis ku saleysan wadahadal siyaasadeed iyo is afgarad. Natiijada ka soo baxda wadatashiyadan iyo habraaca lagu heshiiyo ee ku saabsan hannaanka doorashada sannadka 2016 waxaa lagu soo saari doonaa xeerarka lagama maarmaanka ah oo ay soo saari doonaan hay’adaha Soomaaliyeed ee ay khuseyso.
QAAB DHISMEEDKA KORMEERKA IYO HIRGELINTA
Si loo hirgeliyo habka wadatashiga, waxaa la qaadi doonaa tallaabooyinka soo socda ee dhanka siyaasadda, habraaca, iyo maamulka si ay uga soo baxaan kaalin iskaabta ee kormeerka iyo hirgelintaba.
Madasha Wadatashiga Qaranka
Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ) waxay ahaan doonaa hay’ad go’aan qaadasho oo loo wada dhanyahay waxayna ka koobnaan doonaa laamaha Fulinta iyo Sharci Dejinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS), Dowlad Goboleedyada, iyo Bulshada Rayidka ah. Madasha (MWQ) waxay go’aan ka gaari doontaa habka ugu habboon ee loo qabanayo doorashada sannadka 2016, waxayna guddoomin doontaa geeddi socodka la raacayo ilaa iyo doorasho laga gaarayo oo ay xukun wareejin sannadka 2016 dhacayso. Taas oo ku saleysan mabda’a is afgaradka (concensus). Arrimaha lagu xallin waayo Madasha (MWQ) waxaa loo gudbin doonaa Madasha Hoggaanka Qaranka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Ra’iisal Wasaaraha, si looga yeesho dood dheeraad ah.
Si loo xaqiijiyo in loo wada dhammaado sharcina uu u noqdo geeddi socodka iyo natiijada ka soo baxaysaba, madashu waxay ka koobnaan doontaa: Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, Wasiiro iyo Xildhibaanno heer Federal iyo Dawlad Goboleed ah iyo Bulshada Rayidka. Waxaa muhimad gaar ah leh sidii lagu heli lahaa wakiillo metela haweenka, beelaha Somaliland, iyo dadka laga tirada badan yahay oo tiradoodu u dhiganto inta ay bulshada ka yihiin.
Koox ka tirsan Bulshada Caalamka ayna garwadeen ka tahay Qaramada Midoobay, ayaa kulanka goobjoog ka ahaanaya si ay u la socdaan, waxayna taageeraayaan Madasha Wadatashiga Qaranka, haddii loo baahdana waxay gelayaan dhexdhexaadin toos ah.
GUDDI HAWLEEDKA (TASK FORCE) MADASHA WADATASHIGA QARANKA
Si loo taageero hawsha Madasha Wadatashiga Qaranka, waxaa la sameeyey Guddi Hawleed (Task Force) ku saleysan mabda’a ah in uu ka tarjumo una hawlgalo fulinta go’aanada loo wada dhan yahay Madasha Hoggaanka Qaranka. Hawsha guddigani u xil saaranyahay waxay isugu jirtaa inuu taageero, talana siiyo Madasha Wadatashiga Qaranka, xaqiijinayana sidii lagu hirgelin lahaa geedi socodka wadatashiga.
Guddigan wuxuu hoos imanayaa Ra’iisal Wasaaraha, waxaanna garwadeen ka ah Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka. Guddigu wuxuu ka kooban yahay Wasiiradda Cadaaladda ee heer federal, Arrimaha Dastuurka, Warfaafinta, Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka iyo labo wasiir oo ka socda mid kasta oo ka mid ah Dowlad Goboleedyada Federaalka, iyo hal wakiil oo ka socda Xafiiska Madaxweynaha, Ra’iisul Wasaaraha iyo 3 xildhibaan oo ka socda Baarlamaanka.
Doorka iyo mas’uuliyadda Guddiga (Task Force)
Wuxuu hannanayaa hirgelinta dhabta ah ee go’aanada lagu gaaro Madasha Wadatashiga Qaranka, wuxuu kormeerayaa habsami u socodka wadatashiyada habaysan ee ku cad Qorshe Hawleedka Madasha .
Wuxuu xaqiijinayaa sidii geeddi socodka wadatashiga uga hirgeli lahaa gobollada oo dhan si isku mid ah oo loo wada dhan yahay.
Wuxuu fududeynayaa iskudubaridka xiriirka siyaasadeed ee ka dhexeeya xubnaha Madasha Wadatashiga Qaranka.
Wuxuu bixinayaa talo istiraatijiyadeed, hagid siyaasadeed, sidoo kalena wuxuu taageerayaa Guddiga Taageerada Farsamo (TST) si loo xaqiijiyo in geeddi socodka wadatashigu uu ahaado mid loo wada dhan yahay, oo daahfuran.
Wuxuu xaqiijinayaa in geeddi socodka wadatashiga uu ahaado mid is waafaqsan laguna fuliyo waqtigii loogu tala galay.
Wuxuu warbixin joogta ah oo waqtiyaysan ka keenayaa geeddi socodka una soo gudbinayaa Madasha.
Wuxuu Madasha u soo diyaarinayaa sidii lagu ansaxin lahaa Tilmaamaha Habraaca Fududeynta (Facilitation Guide).
Wuxuu raadinayaa dhaqaalihii/kharashkii lagu hirgelin lahaa Qorshe Hawleedka.
Wuxuu wadatashi toos ah la yeelanayaa dhamman dadka ay arrintu khuseyso ee jooga gobol walba, si loo hormariyo la xiriirka dadweynaha iyo sharcinimada Madasha Wadatashiga Qaranka. Guddiga Taageerada Farsamo (TST) Guddiga Taageerada Farsamo (Technichal Support Team) oo ay garwadeen ka tahay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka waxay mas’uuliyad ka saarantahay laba arrimood oo kala ah; a) taageeridda Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ) iyo Guddi Hawleedka (Task Force), b) wuxuuna xaqiijinayaa arrimaha farsamo ee la xiriira Madasha Wadatashiga Qaranka iyo sidii lagu hirgelin lahaa arrimahaas. Guddigan wuxuu ahaanayaa midka ugu weyn ee talo farsamo siiya Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka, wuxuuna hagid farsamo iyo talo siyaasadeed u fidinayaa Guddi Hawleedka, haddii uu soo codsado, wuxuu soo saarayaa warbixino, qoraallo hordhac ah, wuxuuna bixinayaa taageero la xiriirta sidii loo habayn lahaa Tilmaamaha Habraaca Fududeynta. Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu ka qaybqaadanayaa doodaha siyaasadeed iyo wadahadalka guud ee dadweynaha ee la xiriira geeddi socodka doorashada sannadka 2016.
Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu kaloo Madasha u fududeynaya xiriirka ay la yeelanayso Dowlad Goboleedyada. Wuxuu diyaarinayaa barnaamijyada lagu la xiriiro dadweynaha iyo istiraatijiyadda isgaarsiinta. Guddiga Taageerada Farsamo (GTF) wuxuu ka kooban yahay hawlwadeenno ka socda Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka, Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Ra’iisal Wasaaraha, labo xildhibaan oo ka socda Barlamaanka iyo wakiillo ka socda Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka (hal wakiil midkiiba) iyo koox xeeldheerayaal ah oo ka kooban la taliyeyaal farsamo iyo la taliyaal kale oo ka imanaya Qaramada Midoobay kuwaas oo ahna khubaro iyo fududeeyeyaal.
Doorka iyo mas’uuliyadda Guddiga (TST)
Wuxuu xaqiijinayaa habsami u socodka hogaanka guud ee farsamo iyo maareynta dhanka farsamo iyo sidii lagu hirgelin lahaa hawlaha geeddi socodka wadatashiga.
Wuxuu la tashanayaa dhammaan daneeyeyaasha ay arrintu khuseyso si loo ogaado danahooda, rabitaankooda/kartidooda ku aaddan ka qaybgalkooda, si uu talo u siiyo Guddi Hawleedka (GH) iyo Madasha Wadatashiga Qaranka (MWQ).
Wuxuu maareynayaa guddiyada farsamo, xirfadlayaasha, iyo hawlwadeenada maamulka.
Wuxuu diyaarinayaa barnaamijyo iyo qorshe hawleedyo, wuxuu go’aaminayaa hawlaha loo baahan yahay, wuxuu sheegayaa arrimaha mudnaanta leh, wuxuuna xaqiijinayaa hirgelinta barnaamijka.
Wuxuu la yeelanayaa xiriir shaqo oo joogta ah xogtana la wadaagayaa Guddi Hawleedka Madasha Watashiga Qaran.
Wuxuu xaqiijinayaa sidii taageero siyaasadeed iyo mid maaliyadeedba loogu heli lahaa in geeddi socdka wadatashiga laga hirgeliyo dhammaan gobollada dalka, wuxuuna xaqiijinayaa in ka qaybgalka geeddi socodka uu ahaado mid loo dhan yahay oo habboon.
Wuxuu shir u diyaarinayaa xubnaha Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka si ay ugu heshiiyaan mowduucyada/arrimaha laga doodayo iyo ajendaha geeddi socodka wadatashiga, wuxuuna fududeynayaa doodaha shirka.
Wuxuu faahfaahinayaa Qorshe Hawleedka, wuxuuna guddiyada shaqeynaya ku kaalmeynayaa sidii ay xog uga heli lahaayeen mowduucyada qaarkood (waxay raadinayaan taageerada deeq bixiyeyaasha iyo dowladda si loo helo kaalmo farsamo marka loo baahdo).
Wuxuu xaqiijinayaa in geeddi socodka wadatashiga uu u socdo sidii loo qorsheeyay, wuxuuna xogta u gudbinayaa wixii fikrado ah oo uu soo ururiyo Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka.
Wuxuu diyaarinayaa warbixino ku saabsan hormarka la gaaray toddobaad walba, wuxuuna u gudbinayaa Guddi Hawleedka Madasha Wadatashiga Qaranka iyo daneeyeyaasha kale ee ay arrintu khuseyso (sida
deeqbixiyeyaasha iyo saaxiibada dhiggooda ah), iyo wixii kale oo warbixin
ah ee loo baahdo sida warbixinta la siiyo warbaahinta.
Wuxuu qorayaa maqaallo iyo hadallo la jeediyo iyo khudbado, wuxuuna u qorayaa Guddi Hawleedka iyo Madasha Wadatashiga Qaranka si dadweynaha loogu wargeliyo wixii horumar ah ee laga gaaray geeddi socodka wadtashiga.
Wuxuu xaqiijinayaa sidii dhaqaale loogu heli lahaa xoghaynta iyo guud ahaan geeddi socodka wadatashiga.
Wuxuu diyaarinayaa qorshe ku aaddan sidii kaalmo saad iyo farsamo loo heli lahaa.
Wuxuu maamulayaa dhaqaalaha/kharashka ku baxaya, wuxuuna mas’uul ka yahay sidii lagu heli lahaa isla xisaabtan, daahfurnaan iyo wax qabadka shaqaalaha maamulka iyo barnaamijkaba CUTUBKA SADDEXAAD: Geeddi socodka wadatashiga iyo hababka kala geddisan ee doorashada: Tilmaamahan Habraaca Fududeynta (Facilitation Guide) ma aha mid soo wada koobaya ama qeexaya wixii habab doorasho iyo fikrado ah ee ilaa hadda la soo gudbiyay. Laakiinse, waxuu soo bandhigayaa afar nooc oo kala duwan oo lagu yagleeli karo Ergada Doorasha (Electoral College) (magacaabid ama soo xulid), ergadaas oo iyaduna dooran doonta Barlamaanka Federaalka. Hababka doorasho ee kala geddisan ayaa looga doodi doonaa Madasha Wadatashiga Qaranka iyo wadatashiyada gobollada. Iyada oo la raacayo natiijada ka soo baxda wadatashiyada iyo doodaha aan soo sheegnay, ayaa waxaa la soo diyaarin doonaa tusaalooyin doorasho oo qeexan, si loogu go’aamiyo Madasha Wadatashiga Qaranka iyo sidii lagu hirgelin lahaa, iyada oo lagu saleynayo doodaha billowga ah iyo wadatashida gobollada.
Waxaa la sameyn karaa Ergo Doorasho Qaran (National Electoral College) oo kala leh afar heer: heer qaran, heer dowlad goboleed (oo ka mid ah Dowladda Federaalka ha ahaadaan kuwa hadda jira ama kuwa sameysmi doona), ama heer degmo (92 degmo ee jiray 1991) ama hab beeleed, kuwaas oo kala ah sida soo socota:
o Ergo doorasho oo ka kooban dalka oo dhan:
o Waxaa la sameynayaa Ergada Doorasha (Electoral College) oo ka kooban dalka oo dhan si ay u doortaan 275 xildhibaan. Nidaamka caynkan oo kale ah wuxuu keeni karaa in la dhiso axsaab siyaasadeed oo heer qaran ah iyada oo la raacayo nidaamka matelaadda u dhiganta ee uu xisbi kasta barlamaanka ku yeesho tiro xildhibaano ah oo u dhiganta codadka uu doorashada ka helo. Ergo doorasho oo heer dowlad goboleed ah:
Dowlad goboleed kasta oo xubin ka ah Dowladda Federaalka, ha ahaadeen kuwa hadda jira ama kuwa sameysmi doona, waxay sameyn doontaa ergo doorasho oo dooran doona xildhibaanada baarlamaanka oo metelaya dowlad gobeleedkooda.
o Ergo doorasho oo heer degmo ah:
Degmo walba oo ka mid ah 92dii degmo ee jirtay sannadkii 1991 ayaa sameynaysa
ergo doorasho oo dooranaysa xildhibaanada baarlamaanka u metelaya degmadooda (tusaale ahaan, degmo walba waxay dooranaysaa 3 Xildhibaan, taas oo wadarta xildhibaanada baarlamaanka ka dhigaysa 276).
o Ergo doorasho oo beel ku saleysan:
Waxaa la sameynayaa ergo doorasho oo beel ku dhisan (tani waxay la mid tahay sidii wax lagu soo xulay sannadkii 2012 oo 135 odey dhaqameed ay soo xuleen xildhibaanada) laakiin tiro intaas ka ballaaran oo beelaha metelaya ayaa soo xulaya xildhibaanada metelaya beelahooda.
Qaabka ay u dhacayaan Wadatashiyadda Heerka Dawlad Goboleed.
Wadatashiyadda Heerka Dawlad Goboleed
Shirarka Wadashiyada heerka Dawlad Goboleedyada jira iyo Maamuladda ku meel gaarka ah wuxuu u dhacayaa xili isku mid ah, wuxuuna soconayaa mudo labo maalmood ah, waxayna ka dhacayaan Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, iyo Mogadishu.
Gudiga Hawlfulinta (Task Force) ayaa qabanaya wadatashiyadda Dawlad Goboleedyadda, taasoo ay ka qaybqaadanayaa Baaralamaanka Dawlad/ Maamul Goboleedka, Odayaasha Dhaqanka, Bulshadda Rayadka ah, Hogaamiyayaasha Dhaqanka, Ganacsatadda, Haweenka iyo Dhalinyaradda.
Shirarka waxaa furaya Madaxweynayaasha Dawlad/Maamul Goboleedyadda, waxayna ka koobnaan doonaan sedex fadhi oo labo maalin qaadanaya.
Kulanka Koowaad (90 daqiiqo)
–Hadalka Madaxweynaha (10 daqiiqo)
–Hadalka Afhayeenka Baarlamaanka Dawlad/Maamu Goboleedka (5 daqiiqo) –Hadalka Hoggaamiyaha Dhaqanka Dawlad/Maamu Goboleedka (5 daqiiqo) –Hadalka Wakiilka Ganacstadda (5 daqiiqo)
–Hadalka Wakiilka Bulshadda Rayadka ah (5 daqiiqo)
–Hadalka Wakiilka Haweenka (5 daqiiqo)
–Hadalka Wakiilka Dhalinyaradda (5 daqiiqo)
— Horudhac kooban oo uu Ra’iisuwasaaraha ama Wasiirka wakiilka ka ah uga ah Gudiga Hawlfulinta (Task Force) soo jeediyo taasoo la xariirta qaababka (Models) doorasho ee la kala dooranayo iyo hab raaca dooda (30 daqiiqo)
Kulanka Labaad (soo koobid wixii dhacay maalintii hore) (180 Daqiiqo)
Dood Kooxeed: kasoo qaybgalayaasha waxaa loo qaybin doonaa kooxo (groups) si ay mid mid uga doodaan qaababka (models) iyagoo taxaya faa’iidooyinka iyo ciladaha uu qaab (model) kasta leeyahay.
Waa in la iskugu dhafaa xubnaha Dood Kooxeedka qayabaha kala duwan oo ay kasoo qaybgalayaashu ka kooban yihiin.
Koox kasta waa in uu horkacaa ruux fududeeya ah oo dooda ku haga si natiijo wax ku ool ah lagu gaaro, xoogana saara in aysan wadada ka weecan oo aysan u noqon aragtiyo isku jawaabaya.
Koox kasta waa in ay leedahay ruux wardhaca u qaada oo madasha dooda u soo gudbiya wixii ay ka doodeen oo kooban.
Kulanka Sedexaad (Maalinta Labaad)(60 Daqiiqo)
Furitaanka Madasha (30 daqiiqo)
Koox kasta waa in warbixinteeda soo gudbisaa (10 daqiiqo koox kasta)
Soo gabagabaynta dooda Ra’iisuwasaaraha ama Wasirka ka wakiilka ah (30 daqiiqo).
Xiritaanka Shirka Madaxweynaha Dawlad/Maamul Goboleedka (10 daqiiqo). 14
Waxay ku xirnaan doontaa imkaaniyaadka dhaqaale iyo waqti, labo kulan oo London ama Minneapolis lagu kala qabto ama kulan weyne Nairobi la isku keeno wakiilada Qurbojoogta.
Waxay raacayaan qaabka wadashi ee Dawlad/Maamul Goboleed (Kulan labo maalin soconaya, oo lagu soo bandhigayo Qaababka (models) afarta ah taasoo ay soo bandhigayaan Gudiga Hawlfulinta (Task Force), waxaana xigi doona dood laga yeelanayo faa’iidooyinka iyo ciladaha qaab (model) kasta leeyahay. Ka diban kooxo la isku qaybiyo oo ay ku soo dhamaato warbixin koox kasta madal waynta u soo gudbiso laguna soo ururiyo aragtida ka soo qaybgalayaasha warbixin qoraal ah.
Kulanwaynaha Labaad ee Madasha Wadatshiga Qaran (December 2015)
Waxaa la qaban doonaa usbuuca labaad ee bisha Diseembar 2015ka
Madaxweynaha ayaa furi doona.
Waxaa gudoominaya Ra’iisuwasaaraha
Waxay ka koobaan doontaa labo kulan (session) oo maalin socda
— Hadalka Afhayeenka Baarlamaanka (10 daqiiqo)
— Madaxweynayaasha Dawlad/Maamul Goboleedyadda (10d midkiiba)
—- Wakiilka Bulshadda Rayadka ah (10d)
–Hadalka Ergayga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo ku hadlaya magaca beesha caalamka (10 daqiiqo)
–Soo jeedinta natiijadii ka soo baxday wadatashiyadii heerka Dawlad/ Maamul Goboleed , taasoo uu soo jeediyo Ra’iisuwasaaraha (30 daqiiqo)
–Madasha waxaa loo furayaa dhamaan xubnaha Madasha Wadashiga Qaran kuwaasoo aragtidooda ka dhiibanaya warbixinta talooyinka la soo ururiyey.
— Hadalka soo gunaanadka Madaxweynayaasha Dawlad/Maamul Goboleedyadda (5d kiiba)
—Hadalka soo gunaanadka shirka Ra’iisuwasaaraha (10d)
—-Hadalka soo gunaanadka shirka UN SRSG (5d)
—-Hadalka soo gunaanadka shirka Madaxweynaha (15d)
Marka la soo gabagabeeyo Wadatashiga Heer Gobol iyo Heer Federal, waxaa hannaanka doorasho ee la isku raaco sharci ku meel marin doona hay’adaha federaalka ee ay khusayso.
Be the first to comment!	Read more...	Madaxweynaha oo furey kalfadhiga 7 aad ee Baarlamaanka	Xaflada furitaan kalfdhiga todobaad ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda federaalka oo uu maanta so rasmi ah u furey madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa goob jooga ka ahaa guddoomiyaha Maxkamadda sare ee dalka , Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya, iyo xubno ka tirsan golaha xukuumadda.
Afhayeenka Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan ( Jawaari) oo goobta ka hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii u qabsoomay golaha shacabka 6 dii kalfadhi ee la soo dhaafay.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbadiisa dastuuriga aheyd ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 7 aad ee golaha shacabka ayaa waxaa uu ka hadlay arimaha badan oo xaaladda dalka quseysa.
Madaxweynaha ayaa xubnaha Baarlamaanka waxaa uu ugu hambalyeeyay furitaanka kalfadhigan, waxaana uu sheegay in lixdii kalfadhi ee Baarlamaanka ay ahaayeen kuwo taariikhi ah maadaama qeyb weyn ka qaateen dowlada dhisidda Soomaaliya, waxaana uu tilmaamay in wax badan u qabsoomeen mudadii la soo dhaafay golaha shacabka isla markaana wax badan oo ay aheyd in ay qabtaana ka gaabiyeen.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa rajo aad u wanaagsan ka muujiyay marxaladaha kala duwan dalka uu marayo, isagoo carabka ku dhuftay kaalmada caalamka uu siiyo Soomaaliya.
“ Caalamku aad ayuu noo taageeray waana ugu mahadcelinaynaa wax badan ayayna na tartay,laakiin waxaad ogaataan caalamku siyaasadda in aan ka heshiino oo aan isku mid ka noqono naguma taageeri karo anaga ayaa nalaga doonayaa taasi” ayuu yiri madaxweynaha.
Khudbada madaxweynaha iyo guud ahaan xafladda furitaanka oo si toos ah looga daawanayay Telefishinka qaranka ayaa waxaa uu madaxweynuhu ka hadlay shirkii dhowaan magaalada Muqdisho lagu soo gababeeyay iyo qaabkii ay ku sameysantay madasha wadatashiga Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa soo hadlay qaatay sharciyo aad ugu muhiimsan dowladda Soomaaliya uu hadda horyaala Baarlamaanka waxaana kamid ah sharciga la dagaalanka argagaxisada iyo sharciga maalgashiga caalamiga ah kuwaas oo uu xusay in ay yihiin kuwo dalka wax badan uga xiran yihiin la’aantooda.
“Waxaaan Baarlamaanka ka codsanayaa in ay dadejiyaan shuruucda oo ay shaqeeyaan habeen,maalin iyo Jimco so howsha loo dardargeliyo,” ayuu hadalkiisa ku daray.
Mudane Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dalka ayaa sidoo kale khudbadiisa ku soo hadal qaatay xirirka caalamka ay Soomaaliya la leedahay kaas oo uu ku tilmaamay mid aad u soo hagaagaya maalinba maalinta ka dambeysa.
Waxaa uu madaxweynaha intaas ku daray in dhowaan magaalada Barasalis lagu soo gabagebeeyay shir looga hadlayay caawinta qaxootiga Soomaaliya sidii dalkooda dib ugu soo laaban lahaayeen, waxaana sidoo kale dhowaan la qaban doonaa shir looga hadlayo kor u qaadista adeegyada bulshada ee Soomaliya isla markaana uu xigi doono shir kale oo ku saabsan maalgashiga Soomaaliya.	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	Bankiga horumarinta Afrika oo $ 30 Milyan ugu deeqay Soomaaliya	Dr C/raxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirkii hore ee arimaha dibadda Soomaaliya isla markaana kamid ah mas’uuliyiinta Bankiga horumarinta Afrika oo fadhigiisu yahay magaalada Abidjan ee dalka Ivory coast ayaa Radio Muqdisho u sheegay in Baanka oo ku deeqay 30 milyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu caawiyo qaxootiga Soomaaliya.
Balan qaadan ay sameeyeen Bankiga horumarinta Afrika ayaa qeyb ka aheyd shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada Baraasalis ee dalka Beljam kaas oo looga hadlayay sidii loo caawin lahaa qaxootiga Soomaaliya.
“Anaga waxaan ku deeqnay 30 milyan oo dollar oo aan dooneyno wixii aan qaban karno aan qabano” ayuu yiri Dr Beyle.
Dr C/raxmaan Ducaale Beyle ayaa sidoo kale sheegay in mas’uuliyiinta Bankiga ay dowladda Soomaaliya kala shaqeyn doonaan sidii Baanka qeyb uga qaadan lahaa dib u soo celinta qaxootiga Soomaaliya.
Qaxooti aad u tiro badan oo Soomaali ah ayaa ku nool wadamo badan oo kamid ah caalamka, waxaana tirada ugu badan oo qaxootiga Soomaalida ay ku nool yihiin dalalka Kenya, Itoobiya, Yemen iyo Jabuuti.	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	Madaxweynaha oo warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee Boqortooyada Netherlands	Muqdisho, 24 October, 2015: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho, warqadaha aqoonsiga kaga guddoomay Danjiraha cusub ee Boqortooyada Netherlands wakiilka uga noqon doona Soomaaliya, Amb. Franciscus Albercht Makken.
Madaxweynaha ayaa danjiraha u xaqiijiyey in dowladda Soomaaliya ay si buuxda ula shaqeyn doonto, isla markaana ka mahad celiyey doorka Boqortooyada Netherlands ka qaadaneyso arrimaha Soomaaliya.
Waxaa kale oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga taageero sidii barnaamijyo mihnadeed loogu fidin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed, isla markaana Midowga Yurub iyo beesha caalamka ay ka gacan siiyaan dowladda Soomaaliya sidii loo joojin lahaa falal kaluumeysi sharci darro ah oo ay xeebaha dalka ka sameynayaan maraakiib shisheeye.
Danjire Makken, safiirka cusub ee Netherlands, ayaa isna sheegay in dowladiisa ay sii wadi doonto taageerada ay ka geysaneyso barnaamijyada dib u dhiska iyo horumarinta Soomaaliya.
Waxaa uu intaa ku darey in Boqortooyada Netherlands oo la shaqeyneysa Midowga Yurub ay wadajir wax uga qaban doonaan baahiyada ka jira Soomaaliya, iyagoo talooyin ka qaadanaya madaxda Soomaaliya.
Kulankaasi waxaa goobjoog ka ahaa Wasiir ku Xigeenka Arrimaha Dibedda Axmed Cali Kediye, iyo mas’uuliyiin kale oo ka kala socdey labada dhinac.
Be the first to comment!	Read more...	Guddoomiyaha Baarlamaanka oo shaaciyey in berri uu furmi doono kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka	Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” ayaa shaaciyey in maalinnimada berrito uu si rasmi ah u furmi doono Kalfadhiga 7aad ee Golaha Shacabka.
“Hor iyo horaan waxaan doonayaa inaan ku wargeliyo Xildhibaannada Golaha Shacabka in maalinnimada berrito oo Axad ah taariikhduna ku beegan tahay 25ka bisha October 2015, saacadda 9:00AM uu si rasmi ah u furmi doono Kalfadhiga 7aad ee Golaha, sidaa daraadeed waxaa laga codsanayaa dhammaan Xildhibaannada in ay usoo diyaar garoobaan munaasabadda furitaanka Kalfadhiga iyo waajibaadka dastuuriga ah ee uga abaaran xil gudashada Kalfadhigan” –ayuu yiri Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan “Jawaari” Guddoomiyaha Baarlamaanka.
“Waxaa xusid mudan in Kalfadhigan 7aad ay Golaha hor yaalaan howlo culus oo dhammantood dalkan muhiim u ah, hada inta badan Mudaneyaasha Baarlamaanka waa ay wada yimaadeen, waxaanse ka codsanayaa Xildhibaannada haray ee weli maqan iney si deg deg ah dalka ugu soo xaroodaan si aan u amba qaadno dhameystirka howlaha nalaga doonayo inaan qabanno oo ah kuwo aan xil gudashadooda u dhaaranay” –ayuu hadalkiisa kusoo gebagebeeyey Afhayeenka Baarlamaanka.
Sida ku cad qodobka 90-aad ee Dastuurka Dalka, xarafkiisa (G) Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa furaya Kalfadhiyada Golaha Shacabka, waxaana Kalfadhigan 7aad Baarlamaanka laga doonayaa iney qabtaan howlo badan oo uga haray lixdii Kalfadhi ee hore, hadii uu Alle idmana Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed ee Radio Muqdisho iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed (SNTV) waxey dadweynaha Soomaaliyeed ay si toos ah ugu soo gudbin doonaan kulammada Golaha	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	Faaqidaada kulanka xamaasade leh ee kooxaha West Ham United VS Chelsea.	Published: 24 October, 2015 10:10
Kulanka: West Ham United ? – ? Chelsea
Garoonka: Boleyn Ground, London
Garsooraha: Jon Moss
Taariikhda. Sabti 24 October, 2015
Chelsea waxaa ka dhaawacan wali Thibaut Courtois iyo Branislav Ivanovic halka Loic Remy iyo Pedro uu shaki ku jiro.
West Ham United ayaa badisay hal jeer 18-kii kulan ee ugu dambeeyay Premier league oo ay la ciyaartay kulanka Derby London Chesea,seddex bar baro waxaana laga badiyay 14.
Blues ayaan wax gool ah laga dhalin shantii kulan ee ugu dambeeyay Premier league ay la ciyaartay Hammers.
Goolkii ugu dambeeyay Blus waxaa uu ka dhashay 2012 markaa oo 3-1 ay ku adkaatay West Ham.
Blues ayaa looga dhaliyay Premier league xagaagan shan gool oo madax ah.Dimitri Payet ayaa abuuray fursadaha ugu badan ee gool xagaagan taas oo ka badan xiddig waliba Premier league waana 39 .
West Ham ayaa badisay labadii kulan London Derby ee xagaagan Premier league,waxaana ay ka kala badisay Arsenal iyo Crystal Palace.
Jose Mourinho ayaa laga badiyay shan jeer 52-dii kulan ugu dambeeyay Premier league uu ciyaaray kulumada London Derby isagoo macalin ah,36 waa uu badiyay halka 11 bar baro ay ku dhamaadeen.
Kani waa xili ciyaareedkii ugu fiicnaa ku bilaawasho Premier league West Ham oo sagaal kulan kadib ay heysato 17 dhibcood halka Chelsea uu yahay xili ciyaareedkeedii ugu xumaa ku bilaawasho horyaalka Premier league waxaana ay leedahay 11 dhibcood.
Kaliya Man City oo 24 gool dhalisay ayaa ka badan inta West Ham ay ka dhalisay xagaagan Premier league oo 20 gool ah.
Chelsea ayaa badisay kaliya hal jeer shantii kulan ugu dambeeyay banaanka ay ku soo ciyaarta Premier league,seddex waa laga badiyay halna bar baro.
Be the first to comment!	Read more...	Ra’iisul Wasare Cumar Cabdirashiid: shirkii Belgium waxa uu ku soo idlaaday guul	Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke iyo wafdi uu hogaaminayay oo dalka Belgium uga qeyb galay shir lacago loogu yaboohayay Qaxootiga Soomaaliyeed ee Kenya degan, isla markaana dib dalka ugu soo laabtay ayaa tilmaamay in shirka uu ku soo idlaaday guul, qaxootigana looguy yaboohay boqol milyan oo doolar, si dib loogu soo celiyo dalkooda.
Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid oo wareysi gaar ah siiyay Warbaahinta Qaranka, isaga oo ku sugan garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa xusay in lacagta boqolka milyan ay qeyb ka tahay shan boqol oo milyan oo loogu talagalay in muddo afar sano ah lagu soo uruurriyo, si qaxootiga ku sugan xeryaha dhadhaab dalkooda loogu soo celin lahaa iyaga oo nabdoon.
Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke ayaa hoosta ka xariiqay in sanad iyo bar ka hor ay dowladaha Soomaaliya, Kenya iyo Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNCHR ay wada saxiixdeen heshiis saddex geesood ah, kaasi oo saabsanaa in qaxootiga doonaya in dalkooda ay ku soo laabtaan laga caawiyo wixii ay ku soo laaban lahaayeen, isagoo intaa ku daray in dowladdu ay diyaarineyso meelihii qaxootiga soo laabanaya la dajin lahaa.	Tagged under
Be the first to comment!	Read more...	StartVorige567891011121314VolgendeEinde	Pagina 10 van 31	Bogga Hambalyada
Kusoo dir bamlalyadaada : info @ cadale.com Written on zondag, 25 december 2016 00:00
Dalabkaaga waxaad kusoo diri kartaa E-mailkaan: geeddow@gmail.comXeyeysiis Ganacsi